AKWRIKWỌ AKWRIKWỌ Archives - Okwu Ugbu a
Nchụpụ Onye nche
Ihe na April 4, 2022 April 4, 2022 by Mark
A akụkụ ụfọdụ dị n’akwụkwọ Ezikiel siri ike n’obi m n’ọnwa gara aga. Ugbu a, Ezikiel bụ onye amụma rụrụ ọrụ dị mkpa na mmalite nke m ọkpụkpọ n'ime akwụkwọ ozi a. Ọ bụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ a, n'ezie, jiri nwayọọ kpalie m n'egwu n'ime ihe:Gaa n'ihu Ọgụgụ →
WE ezipụla ọtụtụ ozi amụma n'izu gara aga, ma ugbu a ma site n'iri afọ gara aga, na Russia na ọrụ ha n'oge ndị a. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụghị naanị ndị ọhụ ụzọ kama olu nke Magisterium ka dọrọ aka ná ntị n'ụzọ amụma banyere oge awa nke ugbu a…Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Ihe na February 11, 2022 February 12, 2022 by Mark
Ndị Mallett Clan na-agba maka nnwere onwe…
Anyị enweghị ike ikwe ka nnwere onwe soro ọgbọ a nwụọ.
— Ndị agha Major Stephen Chledowski, Onye agha Canada; Febụwarị 11, 2022
Anyị na-eru nso elekere ikpeazụ…
Ọdịnihu anyị bụ n'ụzọ nkịtị, nnwere onwe ma ọ bụ ọchịchị aka ike…
-Robert G., onye Canada nwere nchegbu (site na Telegram)
A sị nnọọ na mmadụ nile ga-eji mkpụrụ ya kpee osisi ahụ ikpe.
ma kweta na mkpụrụ na mmalite nke ihe ọjọọ ndị na-adakwasị anyị;
na nke ihe egwu ndị na-abịa!
Anyị ga na-emeso onye iro aghụghọ na aghụghọ, onye,
na-eme ka ntị ndị mmadụ na ndị isi na-atọ ụtọ;
ejiriwo ire ụtọ na-ekwu okwu matara ha ọnyà.
—PPO LEO XIII, Humanus Genus, n. Ogbe 28
Echiche Apọkalips nke na-enweghị mgbagha
Ihe na January 5, 2022 January 8, 2022 by Mark
Ọ dịghị onye kpuru ìsì karịa onye na-achọghị ịhụ ụzọ;
na n'agbanyeghị ihe ịrịba ama nke oge ndị e buru n'amụma;
ọbụna ndị nwere okwukwe
jụ ilele ihe na-eme.
-Nwanyị anyị na Gisella CardiaNke Ọktoba 26, 2021
ABỤ m kwesịrị ịbụ ihere site isiokwu a aha — ihere na-ekwu okwu nkebi ahịrịokwu “njedebe mgbe” ma ọ bụ na-ehota n'akwụkwọ nke Mkpughe nnọọ obere anwa anwa ịkpọ Marian apparitions. A na-ewere na ihe ochie ndị dị otú ahụ dị n’obere uzuzu nke nkwenkwe ụgha n’oge ochie n’akụkụ nkwenkwe oge ochie nke “mkpughe nke onwe”, “amụma” na okwu mkparị ndị ahụ nke “akara nke anụ ọhịa ahụ” ma ọ bụ “Onye na-emegide Kraịst.” Ee, ọ kaara mma ịhapụ ha n’oge ahụ a na-esi ísì ụtọ bụ́ mgbe chọọchị Katọlik jupụtara n’ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ ka ha na-ekpochapụ ndị senti, ndị ụkọchukwu na-ezi ndị ọgọ mmụọ ozi ọma, ndị nkịtị kweere n’ezie na okwukwe pụrụ ịchụpụ ihe otiti na ndị mmụọ ọjọọ. N'oge ahụ, ọ bụghị nanị na a na-achọ ihe oyiyi na ihe oyiyi ụlọ chọọchị mma kamakwa ụlọ ọha na eze na ebe obibi. Cheedị echiche nke ahụ. "The Dark Ages" - nghọta ekweghị na Chineke na-akpọ ha.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Fatima, na Nnukwu jijiji
Ihe na December 8, 2021 December 8, 2021 by Mark
FỌD. oge gara aga, dịka m chebara ihe kpatara anyanwụ ji dị ka ọ na-efegharị na mbara igwe na Fatima, nghọta ahụ bịakwutere m na ọ bụghị ọhụụ nke anyanwụ na-agagharị kwa se, ma ụwa. Ọ bụ mgbe ahụ ka m tụgharịrị uche n’ihe jikọrọ “oké ịma jijiji” nke ụwa bụ́ nke ọtụtụ ndị amụma a pụrụ ịtụkwasị obi buru amụma na banyere “ọrụ ebube nke anyanwụ.” Agbanyeghị, na mwepụta nke ihe ncheta Sr. Lucia na nso nso a, ekpughere nghọta ọhụrụ banyere Nzuzo nke Atọ nke Fatima n'ihe odide ya. Ruo ugbua, ihe anyi matara banyere ntaramahụhụ etinyere ụwa (nke nyegoro anyi "oge ebere a") ka akọwara na weebụsaịtị Vatican:Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Ihe na November 23, 2021 November 24, 2021 by Mark
NDỊ a N’ụtụtụ mgbe ekpere gasịrị, ọ kpaliri m ịgụgharị ntụgharị uche dị mkpa m dere ihe dị ka afọ asaa gara aga nke a na-akpọ A tọhapụrụ hel. A nwara m nnọọ izigara gị akụkọ ahụ taa, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ihe dị n’ime ya bụ́ ndị buru amụma na nke dị oké mkpa maka ihe meworo ugbu a n’ime afọ na ọkara gara aga. Lee ka okwu ndị ahụ si bụrụ eziokwu!
Agbanyeghị, a ga m achịkọta isi ihe ụfọdụ wee gaa n'ihu na “okwu ugbu a” ọhụrụ nke bịakwutere m n'oge ekpere taa… Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Oge awa nke nnupụisi obodo
Ihe na November 10, 2021 November 17, 2021 by Mark
Nuru, unu ndi-eze, ghọta-kwa-nu;
mụtanụ, unu ndị ọkàikpe nke mbara ụwa!
Ṅaa ntị, unu ndị ji ike n’ebe ìgwè mmadụ nọ
ka nwe kwa onye-nwe-ya n'isi ìgwè ndi di iche iche!
N’ihi na ọ bụ Jehova nyere unu ikike
na ọchịchị nke Onye Kasị Elu,
Onye gānyocha ọlu-gi nile, tu kwa ndum-ọdu-gi nile.
N'ihi na ọ bu ezie na unu bu ndi-ozi nke ala-eze-Ya;
i kpeghi ikpe ziri ezi;
ma o debeghi iwu;
unu eje-kwa-la dika uche Chineke si di;
Ọ ga-eji ngwa ngwa bịa imegide gị;
n'ihi na ikpé siri ike n'ebe ndi elu-igwe nọ.
N'ihi na a ga-agbaghara ndị dị umeala n'obi n'ebere…
(Nke taa Akpa Ngụ)
IN mba dị iche iche gburugburu ụwa, ụbọchị ncheta ma ọ bụ ụbọchị ndị agha ochie, na ma ọ bụ nso na Nọvemba 11, bụ ụbọchị ncheta na ekele maka àjà nke ọtụtụ nde ndị agha ndị nyere ndụ ha n'ịlụ ọgụ maka nnwere onwe. Mana n'afọ a, emume a ga-adaba n'ime oghere maka ndị lere anya nnwere onwe ha na-apụ n'ihu ha.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Mgbe I ji Ihe Ọjọọ Na -eche ihu
Ihe na October 1, 2021 October 2, 2021 by Mark
ONYE nke ndị ntụgharị okwu m zigaara m akwụkwọ ozi a:
Ruo ogologo oge ụka na -ebibi onwe ya site na ịjụ ozi sitere n'eluigwe na enyereghị ndị na -akpọ eluigwe maka enyemaka aka. Chineke gbachiri nkịtị ogologo oge, ọ na -egosi na ya adịghị ike n'ihi na o kwere ka ihe ọjọọ mee ihe. Aghọtaghị m uche ya, ma ọ bụ ịhụnanya ya, ma ọ bụ eziokwu na ọ na -ahapụ ihe ọjọọ ka ọ gbasaa. N'agbanyeghị nke ahụ, o kere SATAN ma o bibighị ya mgbe ọ na -enupụ isi, mee ka ọ ghọọ ntụ. Enweghị m ntụkwasị obi karịa na Jizọs onye echere na ọ dị ike karịa Ekwensu. Ọ nwere ike were naanị otu okwu na otu mmegharị ma ụwa ga -azọpụta! Enwere m nrọ, olile anya, ọrụ, mana ugbu a enwere m naanị otu ọchịchọ mgbe ọ ga -abịa na njedebe nke ụbọchị: imechi anya m nke ọma!
Ebee ka Chineke a nọ? ọ bụ ntị chiri? o kpuru ìsì? Ọ na -eche banyere ndị na -ata ahụhụ?….
Ị na -arịọ Chineke maka ahụike, ọ na -enye gị ọrịa, ahụhụ na ọnwụ.
Ị na -arịọ maka ọrụ ị nwere enweghị ọrụ na igbu onwe gị
Ị na -arịọ maka ụmụaka ị nwere amaghị nwa.
Ị na -arịọ maka ndị ụkọchukwu dị nsọ, ị nwere ndị nweere onwe ha.
Ị na -arịọ ọ joyụ na obi ụtọ, ị nwere ihe mgbu, iru uju, mkpagbu, ihe ọjọọ.
Ị na -arịọ maka eluigwe ị nwere hel.
Ọ na -enwekarị mmasị ya - dị ka Ebel nye Ken, Aịzik nye Ishmael, Jekọb nye Isọ, ndị ajọ omume nye onye ezi omume. Ọ dị nwute, mana anyị ga -eche eziokwu bụ na SATAN dị ike karịa ndị nsọ niile na ndị mmụọ ozi jikọtara! Yabụ ọ bụrụ na Chineke dị, ka ọ nwapụta m, a na m atụ anya iso ya kparịta ụka ma ọ bụrụ na nke ahụ nwere ike ịtụgharị m. Achọghị m ka a mụọ m.
Nnukwu ebepu ihe
Ihe na September 20, 2021 November 1, 2021 by Mark
Nke mbụ bipụtara na Machị 30, 2006:
EBE AHỤ ga-abịa oge mgbe anyị ga-eje ije n'okwukwe, ọ bụghị site na nkasi obi. Ọ ga-adị ka a ga-agbahapụ anyị… dịka Jizọs n'ime Ogige Ubi Getsemane. Mana mmụọ ozi nkasi obi anyị n’ogige ahụ ga-abụ ihe ọmụma na anyị anaghị ata ahụhụ naanị anyị; na ndị ọzọ kwere ma na-ata ahụhụ dịka anyị na-eme, n'otu ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ.Gaa n'ihu Ọgụgụ →